Home » Creative Writing » လူနုံများသို့ ဆဲဆိုခြင်း (၁)
.ဖောက်ပြားတဲ့ ယောကျာ်းတွေ တွေ့ရင်…
.ဒါမှ ခြောက်ခြားပြီး…အဲ့ယောကျာ်းတွေ… မဖောက်ပြားရဲတော့မှာ…
ဘာသာရေးက.. ဥပဒေပြုရေးထဲအထိဝင်ရှုပ်လာရင်.. အဲဒီတိုင်းပြည်… ပျက်ဖို့သာပြင်ပေရော့…
ဒီနေရာမှာတော့ သူကြီးနဲ့ ကျွန်မ သဘောထားတူပါတယ်. ဘာသာရေး က ကျွန်မ တို့ကို လမ်းညွှန်ဖို့ပါ။ မြတ်စွာဘုရားလည်း ဒီလိုဟောခဲ့တာပဲ။ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ တရားထဲမှာ မိန်းမ ဘယ်နှစ်ယောက်ယူ ဘယ်ယောကျာင်္း ဘယ်မျိုးနွယ်ကိုပဲ ယူလို့ မပါဘူး။ ဒါကို ပြင်ကြတယ်။ နောက်တစ်ခု သင်္ကန်းတကားကားနဲ့ ဥပဒေ ပြုရေးထဲဝင်ကြပြန်တယ်။ သူတို့ပြုတဲ့ ဥပဒေကိုကြည့် လင်ယူ သားမွေးကိစ္စ လားလားမျှ မအပ်စပ်။ ဒဲ့ပြော ဒဲ့ရှင်း ပြန်တော့ ကျွန်မပဲ အဆဲခံရတယ် သူကြီးရေ….. တိုင်းပြည်အခြေအနေ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ နောက်မျိုးဆက် နှစ်ဆက်လောက်ကို အတော်ပြင်ရအုံးမယ်…..
ဟေသီတမီးလေးနဲ့ ခြေစမ်းပွဲ တဗွဲတလမ်းလောက် ကစားခြင်လိုက်တာ… စိမ်လား…
။။ အိမ်း.. ငှသား စံဓ ပြည့်ဆေ..
.ဘုန်းကြီးတွေပြဋ္ဌာန်းခိုင်းတဲ့ ဒီဥပဒေတွေကိုလုံးဝ လုံးဝ လက်မခံ၊ ကန့်ကွက်ပါသည်
ဦးကြောင် စိန်လိုက်လေ တွေ့တာပေါ့….
..မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မိန်းကလေးများအထူးထိမ်းမြားမှု အက်ဥပဒေဆိုတော့ကာ ..ကျော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်…ကျော်တို့ကကချင်..ပြီးတော့ခွစ်ရှန်…အဟိဟိဟိ
အမျိုးး ဘာသာ ဘာသနာ ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးးပါဆုံးး က